aphorisms Jarmal, erayo Jarmal qurux badan, sutra Jarmal, aphorisms Jarmal, hadalkaas oo Jarmal, erayo qurux fiican kooban Jarmal, fariimaha fiican Jarmal, sutra fiican Jarmal, fariimaha Jarmal gaaban
MA JECESHAHAY IN AAD NOQOTID MIT SIRDOON GAAR AH (Wakiil)? HALKAN WAA SHARCIYADA!
Safarkayaga qaaliga ah waxaa laga soo ururiyay saamiyada xubnahayaga kuwaas oo ka diiwaangashan golaha Jarmalka ee hoos ku taxan, iyo qaladaad yar oo xarfaha ah, waxay abuurtaa khaladaadka iwm. waxaa laga yaabaa, waxaa lagu diyaariyey by soo socda macallimiinta Dabcan almancax, sidaa daraadeed waxa ku jiri kara qaar ka mid ah cayayaanka si ay u gaaraan casharada loo diyaariyey by macalimiinta almancax almancax fadlan booqo forumka.
GARSOORAYAASHA GARGAARKA GARGAARKA, GURI LA'AAN AH
Wenn Freiheit waxay uberhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, iyo Leuten das zu sagen, waxay ahayd munaasabadda xafladaha.
Haddii xorriyadda ay macno leedahay, waa xaq inaad u sheegto dadka kale waxa aadan rabin inaad maqasho.
Die Freiheit IST nicht dhiman Willkür, beliebig zu handeln, sondern dhiman Fähigkeit, vernünftigen zu handeln.
Xoriyadda si ay u dhaqmaan si aan macquul ahayn ma aha wax dabeecad xumo, laakiin halkii ay ku dhaqaaqi lahayd ugaadhsiga iyo sirdoonka ..
Frei sein, heißt wählen können, Wessen Sklave nin sein.
Xorriyadda waa in la ogaado cidda aad rabto inaad noqoto maxbuus.
Frau Sein zu schwer IST - nin Wie muss Ein dhiganta Mann, sich eine Wie sita benehem Dame, aussehen Wie Ein Mädchen und Wie Ein Pferd ka SCHUF.
Way adag tahay in la noqdo haween farshaxan; u maleyn sida nin, u dhaqmid sida gabadha, u eeg sida gabar yar oo u shaqeeya sidii faras
Verbringe ayaa u dhinta badbaada Nicht ka mid ah Suche nach einem Hindernis,
Waqtigaa baadhitaanka naafada,
waxaa laga yaabaa in aysan jirin wax caqabad ah
Ka taxaddar fekerkaaga!
Heutigentags sagen und schreiben viele Gelehrte mehr, als sie wissen; in ay ka mid ah Zeiten wussten einige mehr, als sie schrieben.
Maanta, aqoonyahanno badan ayaa qora oo sheegaya in ka badan ay yaqaaniin; Maalmihii hore waxay ogaadeen inay ka badan yihiin wixii ay qoreen.
Yaa ka madax banaan,
waxay ubaahan tahay wax laga xishoodo
Waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo,
oo aan ku habboonayn Klang der Musik Erbebte, Isteshin Mensch, sondern ein Esel.
Haddii aan cidina aboorin, haddii uusan jeclayn,
iyo haddii uusan u gariirin codka muusikada, ma aha Essekir.
Wer sich in Dinge einmischt, u dhinta ihn nichts angehen,
Dye, u dhintaan ihm nicht gefallen.
Haddii qofku faragaliyo waxyaabo aan la xiriirin, wuxuu maqli karaa waxyaabo aan tegin.
Wer Honig essen ayaa,
Yaa doonaya malab malab,
Dareenkaagu wuxuu isku laabmaa
Qalabka Krankheit, kumbuyuutarrada oo dhan, ayaa ahaa mid aad u sareeya.
Qof kasta oo aamminsan wax kasta oo qaba jirro hore
Dhamaan dadka oo dhami way diidi doonaan.
Wax kasta oo doonaya in wax walba la helo, lumiyo wax walba
Faa'iidooyinka iiga marka aan dhageysto.
Markaan la hadlayo dadka kale
Saaxiibkaaga safarka ugu horeeya, ka dibna jidkaaga
Qofna ma qallajin karo ilmada qofkasta adoon qallajin karin gacmahooda
Yuu laba jibbaar ka sameeya laba xabbo, indhoole.
Haddii qof wax ku siiyo, wuxuu ku siin doonaa laba jeer.
Sida ugu sahlan wax waliba waa u dhagaystayaasha.
Willst du Sicherheit im Leben, si aad u sageena si aad u yar.
Noloshaada marka aad rabto inaad ku kalsoonaato, marwalba ma ogi.
Das ayaa ugu fiican Wissen ist das, oo ahaa dukaanno, wenn du es brauchst.
Aqoon wacan, markaad u baahatid, waad taqaanaa.
Sidaas daraaddeed nin baa dhinta, wuuna dhiman doonaa.
oo sidaas yeela: waxaa kici doona kuwa qosolka naarka ku injiilka.
Sidee baad u dari kartaa qorraxda qoraxda,
ma iftiin kartid nalkaaga
Wer viel khudbada weniger Zeit zum Denken.
Hadal badan, waqti maaha inaad ka fekerto
Tadel nich den Fluß, Wenner fällst.
is-khilaafsan, ogaanshaha khalad
Werkeeduna wuxuu ku yaryaraa Essen.
Calismyan, ma cuni kartid
Shot ayaa ninkan ka mid ah
Faraska hadiyaddiisa ee afka ayaa ah mid aan loo dulqaadan karin
Waxaynu baraneynaa dugsiga, ee ma ahan nolol
Ragga wanaagsan, shabakad fudud
Laba qof ayaa sameeya wax isku mid ah, ma aha isku mid
Niemand kann auf Dauer eine Maskada maskaxda!
Qofna ma qaadi karo maaskaro muddo dheer
Die Kuh ken kenya, der si aad uhadal ah, aber nicht den, si aad u hesho.
Lo'da way ogyihiin baabuurka, laakiin ma aqaano cidda ay tahay.
Bit Aslan waa ka taxaddar badan, tan iyo markii Aslan qaniinto
Vom zu vielen Schlafen hat die Schlage ihre Füße verjonen.
Cagihiisa ayuu ka lumay xayndaabka
Wenn du wissen, waxay ahayd, Nachbar von dir dikt, sidaa darteed fage Streit mit ihm an.
Haddaad rabto inaad ogaato waxa qofka kaa soo horjeeda uu ka fekerayo adiga, ku bilaw dagaal isaga
Gacmeedkuna wuxuu ku yaryaraa, Gott Gott.
Qanacsan yihiin ama hodanka ah, dhammaantood waa isku mid
Isagu kuwa xaqa ah xigmad lahu ha kula jirto
Gacmaha iyo hugaamo kalana waa nicht verstecken.
Xumad iyo jahwareer
Arme mag bini aadan, Bettler nicht.
Kuwa saboolka ah waa la jecel yahay, gaajaduna waa kuwa aan jeclayn
# GARSOORAYAASHA GARGAARKA GARGAARKA, GURI LA'AAN AH
Tags: Jarmal qurux badan, Farriinta quruxda Jarmalka, Ereyada wanaagsan ee Jarmalka, Jarmal qurux badan, Farriimaha Jarmalka, Jarmal Maxims, Ereyada wanaagsan ee jarmalka Jarmalka, Ereyada Jarmalka, Jarmalka iyo ajnebiga